“Mampahery sy Mamelombelona Anay” ny Tele JW
Ny Fitoriana eny Amin’ny Saha no Loha Laharana
“Ianareo no Mpiray Tanàna Mahafinaritra Indrindra”
Fivoriana Vaovao Manatsara ny Fiainantsika sy ny Fanompoana
Raharaha Ara-pitsarana 2016
Indray Mitopy Maso An’i Géorgie
Ireo Olona Voalohany Nitady ny Fahamarinana
Nanatanjaka Finoana ny Fivoriana
Tena Te Hiova Aho
Niandry ny Tari-dalan’i Jehovah Aho
“Hain’Andriamanitra ny Zava-drehetra”
Baiboly Amin’ny Teny Géorgien
‘Andriamanitra no Tsy Nitsahatra Nampitombo.’—1 Kor. 3:6.
Nampiofana Ireo Mpiandry Be Fitiavana
Satriny Foana Hamaky An’ilay Izy!
Fa Taiza Foana Ianareo?
Nieritreritra Aho hoe Efa Tafita
Mifankatia Foana ny Tena Kristianina
Ny Masoko Mihitsy no Nahita Izay Lazain’ny Baiboly!
Nahazo Fitahiana ‘na Tamin’ny Mora na Tamin’ny Sarotra.’—2 Tim. 4:2.
Tsy Nahomby ny Fandrahonana
“Izany no Lovan’ny Mpanompon’i Jehovah.”—Isaia 54:17.
Nahatsiaro An’ilay Mpamorona Be Voninahitra Izy Ireo
Nanaiky ny Fahamarinana ny Kurde
Tsy Voasakan’​ny Sisin-tany ny Fitiavana
Zato Taona Lasa Izay: 1917
Tatitra Maneran-tany 2016
Tatitra Maneran-tanin’​ny Vavolombelon’​i Jehovah, Taom-panompoana 2016
Diarin’ny Vavolombelon’i Jehovah 2017
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Ossète Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Sesotho (Afrika Atsimo) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tiorka Tseky Tsonga Xhosa Yorobà Zoloa
MAMPAHERY sy mamelombelona mpijery maro eran-tany ny Tele JW, ao amin’ny Internet, hatramin’ny nivoahany tamin’ny 2014 ka hatramin’izao. Azo jerena amin’ny fiteny 90 mahery izao io tele io. Efa voadika amin’ny teny éwé sy ga ary twi (eo amin’ny sary), ohatra, izy io ka faly ny mpitory 130 000 mahery any Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, ary Togo. *
Hoy i Agatha, vadin’ny mpiandraikitra ny faritra any Ghana: “Hoatran’ny hoe i Jehovah mihitsy no miresaka amiko ao an-trano rehefa mihaino ny ranadahy anisan’ny Filan-kevi-pitantanana sy ny mpanampy azy aho. Tsy ho nanana tombontsoa hoatr’izany aho raha tsy nisy an’io fandaharana io. Izaho anefa atỳ amin’ny tanàna kely atỳ sady tsy hoe olona miavaka be. Lasa akaiky an’ireo mpiara-manompo eran-tany isika noho io fandaharana io.”
Ity misy tatitra avy any Zambia: “Betsaka ny fiangonana miezaka mafy hijery ny Tele JW na dia tsy manam-bola firy aza ny mpitory. Ambanivohitra be, ohatra, no misy ny Fiangonana Misako, ary 30 kilaometatra eo ho eo miala eo vao misy tanàna lehibebe. Miakatra be koa ny rano rehefa fahavaratra sady mahery be.” Hoy i Simon, mpanampy amin’ny fanompoana manitatra ao amin’ilay fiangonana: “Mandeha an-tongotra adiny roa eo ho eo mamonjy arabe ny olona iray ao amin’ny fiangonanay. Rehefa tonga eny izy dia mandeha fiara fitateram-bahoaka mankany amin’ilay tanàna misy rahalahy afaka maka an’ireo fandaharana. Izany no hahazoanay ny fandaharana isam-bolana. Misy rangahy 70 taona sy ny zanany roa lahy, eo an-tanàna, mbola tsy nanatrika fivorian’ny Vavolombelon’i Jehovah mihitsy. Henon’ilay rangahy anefa hoe hisy video halefa any am-pivoriana. Gaga izy hoe any ambanivohitra be any ve dia hisy video! Nivory àry izy ka niaiky hoe: ‘Hoatr’izao mihitsy no tokony ho fomba hianarana momba an’Andriamanitra.’”
Izao no voalazan’ny taratasy fisaorana iray avy any Rosia: “Herintaona izay no nijerenay ny Tele JW, dia faly be izahay hoe afaka manaraka an’ilay izy. Raha vao avy nijery ny fandaharana voalohany izahay dia tsapanay hoe tafaray amin’ny mpiara-manompo rehetra izahay. Mahagaga a! Tsapanay hoe hoatran’ny fianakaviambe iray isika. Faly be izahay nahita ny rahalahy anisan’ny Filan-kevi-pitantanana. Tena te hanome sakafo amin’ny fotoana mety ry zareo, dia isika rehetra no afaka mahazo an’izany. Tsy andrinay foana izay hijerena ny fandaharana manaraka. Vao mainka izahay mirehareha hoe Vavolombelon’i Jehovah. Misaotra betsaka, ry rahalahy! Misaotra an’i Jehovah sy Kristy koa izahay satria manao zavatra tsara be ry zareo. Mampahery sy mamelombelona anay ireny.”
Hoy i Horst sy Helga, mpivady be taona sady marary, any Alemaina: “Tsy misy hoatran’ny Tele JW! Manatanjaka anay ilay izy, indrindra rehefa misy tantarana rahalahy sy anabavy malemy. Rehefa mahita azy ireny izahay dia te hanao izay vitanay na dia marary aza. Nahita tantaran’anti-panahy iray malemy tongotra, ohatra, izahay tao dia takatray hoe afaka manome zavatra tsara ho an’i Jehovah foana ny tsirairay. Te hisaotra an’i Jehovah izahay rehefa mahita rahalahy sy anabavy modely hoatran’ireny, ary mivavaka izahay mba hotahin’i Jehovah izy ireny.”
Hoy i Kodi, any Angletera: “Misaotra anareo fa mahafoy fotoana sy miezaka be ianareo mba hikarakarana ny jw.org, ny Tele JW, ary ny video misy an’i Kaleba sy Sofia. Misaotra fa lasa azoko tsara izao ny ao amin’ny Baiboly. Natao batisa aho tamin’izaho valo taona, dia hiasa an-tsitrapo hanorina Efitrano Fanjakana aho rehefa lehibebe! Te hiasa ao amin’ny Betela koa aho. Kely sisa dia afaka manao an’izany aho satria sivy taona aho izao.”
Hoy i Arabella, ankizivavy valo taona any Angletera: “Misaotra anareo mamoaka video sy kilalao ao amin’ny jw.org. Tena manampy ahy hahafantatra tsara an’i Jehovah ireny. Sady mianatra momba an’i Jehovah aho no mifalifaly rehefa manao an’ireny kilalao ireny. Mahay mamorona hira mora tadidy koa ianareo. Manampy ahy koa ny video misy an’i Kaleba sy Sofia. Misaotra fa miasa be ianareo.”
^ feh. 3 Midira ao amin’ny tv.jw.org raha te hijery ny Tele JW.